Dadaallada Mideynta Manjahka waxbarashada Dalka iyo Caqabada ku hor gudban – Kalfadhi
Dadaallada Mideynta Manjahka waxbarashada Dalka iyo Caqabada ku hor gudban
Muddooyinkii u dambeyey waxa socdey dadaallo badan oo ku aaddan sameynta manhaj Soomaaliyeed oo mideysan iyo sidii sare loogu qaadi lahaa tayada waxbarashada dalka guud ahaan oo ay sameyneysay dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda waxbarashada iyo Tacliinta Sare oo kaashaneysa khubaro Soomaaliyed iyo hay’ado ka shaqeeya waxbarashada.
Dowladda Soomaaliya ayaa 11-kii bishii Juun ee 2018-ka daahfurtey buugaagta manhajka waxbarashada qaranka ee dugsiyada hoose kaas oo ay soo diyaarisey wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo la filayo in lagu baahiyo dugsiyada dalka ka jira.
Manhajka waxbarasho ee buugaagta la dhammeystirey aya ka kooban siddeed maado uu ku qoran afka Soomaaliga marka laga reebo luqadaha Carabiga iyo Ingiriiska sida uu sharraxaayo agaasimaha xafiiska manaahijta ee wasaaradda waxbarashada mudane Maxamed Xassan Muhtaar:
“manhajka waxbarasho ee dugisyada hoose (lower primary) ee fasallada 1-aad ilaa 4-aad baan dhammeystirney. Waa manhaj ka shaqeysiinaya maskaxda ardeydga. Inta badan layliyo iyo shaqooyin ardeygu qabanaayo ayey u badan yihiin. “
Agaasime Maxamed ayaa intaa ku darey in manhajkaan uu xal u noqon dono dhibaatooyin badan oo tarbiyada iyo manaahijta kala duwan ay keenayaan isla markaana uu ku hogaamin doono ardayda Soomaaliyeed waddaniyad, islaam, isjecel, feker iyo mansab mideysan.
Manhajka waxbarasho ayaa ah nidaam ama waddo loo maro in lagu gaaro ujeedooyin waxbarasho oo degsan kaasoo leh dhammaan wixi loo baahnaa in lagu gaaro ujeedadaas, sida uu kalfadhi u sheegay Prof Cabdullahi Axmed Bariise oo ah Gudoomiyaha Jamacadda City, ahna aqoonyahan ku takhasusay waxbarashada sare.
Manhajka waxbarasho ayaa saldhig u ah waxbarasho leh heerar kala duwan taasoo leh midba muhiimadeeda gaarka ah sida uu tilmaamaayo Prof Bariise.
“ heerarka kala duwan ee waxbarashada midba midka ka sareeyo ayuu sal u yahay oo u diyaarinayaa. Tusaale dugsiga hoose wuxu u diyaarinayaa ardeyda dugsiga dhexe, ardeyga aasaas-kiisu wanaagsan yahay wuu ku wanaagsanaanayaa heerarka kale ee waxbarashada. ”
Caqabadaha ku hor gudban dhaqangelinta manhajka mideysan
Gobollada iyo deegaannada gaar oo aan ku jirin gacanta dolwadda isla markaasna ay caqabad noqon karto in la wada gaarsiiyo dhaammaan qeybaha dalka.
Dhaqaalaha ayaa noqon kara caqabad kale oo soo wajahda hirgelinta manahjka waxbarasho gaar ahaan daabaaacaadda iyo qarashaadka ku baxayo baahintiisa.
Wax ku dhigashada afafka qalaad siiba luqadaha Ingiriiska iyo Carabiga oo aad ugu baahay dalka islamarkaana dadku aan u bisleyn wax ku dhigashada luqadda Af-soomaaliga.
Mideynta manaahijta laga isticmaalo maamul gobolleedyada qaar oo ayadane caqabad noqon karta iyadoona ay jirto in mamulada qaar sida Puntland aysan weli qeyb ka aheyn imtixanaadka mideysan ee dowladda federaalka ay qaado.
Siyaabaha loo hirgelin karo Manhajka waxbarashada ee duqsiyada hoose
Prof. Cabdullahi Axmed Bariise ayaa ku talinaya talooyinka soo socda si xal loogu helo caqabadaha ka hor imaan kara higelinta manahjkaan:-
In waxbarashadu aan la siyaasadeyn ayna noqoto wax dan guud ah si loo wada gaaro dhammaan qeybaha kala duwan ee dalka.
In dhaqaalaha ku baxaya dhaqangelinta manhjka aan laga sugin hay’ado ama ajnabi ee ay dadku isku tashadaan si hirgelintiisa ay u sahlanaato.
Iyo in la sameeyo ka dhaadhicin iyo wacyigelin guud si bulshadu ay u fahmaan muhiimadda uu leeyahay manhajka mideysan iyo luqadda Af-Soomaaliga.
In bulshadu ay ka wada qeyb qaadato hirgelinta manhajka islamarkaana ay dareemaan lahaanshaha manhajka.
Manhajka waxbarashada qaranka ee dugsiyada hoose ayaa soo marey marxalado kala duwan iyadoona howshiisa ay soo bilaabatey 2013kii balse caqabado la xiriira dhaqaalaha ay dib u dhigeen. Khubaro, ganacsato iyo aqoonyahano soomaaliyeed ayaana gacan weyn ka geystey dhameystirka manhajka waxbarashada ee dugsiyada hoose oo la filayo in bishaan Agoosto hirgelintiisa ay ka bilaabato dugsiyada dalka sida agaasimaha xafiiska manaahijta uu u sheegey wabaahinta Kalfadhi.
W/D: Maxamed Shariif Isxaaq
Xildhibaan Sakariye : Soomaaliya Oo Aan La Hishiin Erateriya Kama Hadli Karto Dhulka Jabuuti Ka Maqan